Feysal Cali Waraabe: Inanku waa inankeygii!! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Gudoomiyaha Xisbiga UCID, Feysal Cali Waraabe ayaa xaqiijiyey inuu wilkiisa yahay nin Soomaali ah oo kazoo muuqday cajal ay dalka Ciraaq kazoo direen dowladda Islaamiga ah ee uu hogaamiyo Abuubakar Al-baqdaadi.
Feysal Cali Waraabe oo la hadlay BBC ayaa sheegay in wiilkaan oo kazoo muuqday cajalka ISIS, magaciisana ku sheegaya Abuu Shuceyb Al-soomaali, uu yahay wiilkiisa oo lagu magacaabo Xuseen Feysal Cali Waraabe.
Wuxuu sheegay Feysal Cali Waraabe in wiilkaani bilaabay inuu ka baxsado Hargeysa bilowgii sanadkii 2013, uuna markii dambe u baxsaday debadda, haatana uu kazoo muuqday cajalka ay soo saartay ISIS.
“Inanku waa inankeygii, Alxamdulilaahi Rabil Caalamiin, wuxuu dalka Finland ku dhashay sanadkii 1991-kii, muddo 3 saddex sano ah ayuu dalka joogay, 2013 ayuuna ka baxsaday Hargayesa” ayuu yiri Feysal Cali Waraabe.
Wuxuu sheegay Feysal Cali Waraabe in markii wiilkaasi baxsadka bilaabay uu dedaal u galay sidii uu celin lahaa balse uu ka baxsaday.
Bishii Febaraayo ee sanadkii 2013 ayaa Xuseen Feysal iyo gabar uu guursadey oo kazoo jeeday magaalada Wajeer ee gobolka Woqooyi Bari Kenya waxaa lagu qabtey magaalada Laassnaacood iyaga oo doonayey iney galaan Koonfurta Soomaaliya si uu uga mid noqdaan dagaalyahanada Al-Shabaab.
Wiilka uu dhalay Faysal Cali Waraabe oo ku hadflaya luuqada dalka Finland ayaa sheegey in ay raayada Islamka ka taagi doonaan dalka uu ka soo jeedo ee Finland.
Maleeshiyo beeleed xoog kula wareegay TV-ga maamulka Puntland